Soo saaraha Filimka muranka dhaliyay ee Kashmiir oo caro weyn muujiyay - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
February 13, 2020 at 17:09 Soo saaraha Filimka muranka dhaliyay ee Kashmiir oo caro weyn muujiyay2020-02-13T17:09:39+01:00 WARARKA SOOMAALIYA
Shikara ayaa lagu soo bandhigay waxa loogu yeeray “Qisada aan la sheegin ee cuqaasha Kashmiir”.
Vidhu oo dhaliishan caro weyn ka muujiyay ayaa sheegay dadka ku eedeynaya inuu dhaqaale ku doonayo filimkaas ay yihiin “Dameero”.
“Filimka 3 Idiots, oo aan aniga soo saaray, wuxuu maalintiisii ugu horreysay ee lasii daayay soo xareeyay lacag faa’iido ah oo dhan Rs 33 crore, haddana waan ognahay filimka Shikara uu maalintii ugu horreysay soo xareeyay lacag intaas aad iyo aad uga yar oo ah 30 lakh. Iyadoo taasi ay jirto, haddana muddo 11 sano ah ayaa nooga baxday sameynta filimkan”, ayuu yiri.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri; “Maanta waxaan dareemayaa in arrimaha ay isu baddaleen wax lagu qoslo, filimkii aan dhaqaalaha sidaas u badan ka sameeyay waxba la igama dhihin, haddana filimkan kharashka hoose ah, oo aan ka sameeyay xasuusta hooyadey ayaa la iigu eedeynayaa inaan ganacsi ka raadinayo, anigoo ka faa’iideysanaya xanuunka dadka reer Kashmiir”.
“Waxaan dareemayaa in dadku ay u maleynayaan inaan nahay Dameero, waana taas sababta aan ugu leeyahay idinku ha noqonnina dameero”., ayuu yiri.
Wuxuu dadka dhaliilaha jeedinaya u sheegay inaysan ku degdegin go’aankooda.
“Marka hore filimka daawada kaddibna fikirkiinna ka dhiibta” ayuu yiri Chopra, oo booqasho ku joogay mac-had ku yaalla magaalada Mumbai, halkaasoo uu taageero uga raadinayay filimkiisa.
« Waa Warshada Wax Soo Saarka- Kadib Heshiiska Cheslea Ee Hakim Ziyech, Akhriso Lacagta Layaabka Leh Ee Ay Ajax Kooxaha Yurub Ka Heshay.
Somali remittance company Al Barakat removed from U.S sanctions list »